ukhenketho nokhenketho | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: uhambo no khenketho
Iholide ezithandekayo kwihlabathi
ezaposwa ngomhla 14.08.2021 14.08.2021
Ngaba uyazi ukuba iiholide azonwabisi nje? Zininzi izithethe ezothusayo nezothusayo phantse kuwo onke amazwe ehlabathi!
I-Turkey lilizwe ekuhlanganeni kwamazwekazi amabini
ezaposwa ngomhla 08.04.2021 08.04.2021
I-Turkey ngamehlo okhenketho ziilwandle ezintle kunye neentaba eziphakamileyo, i-Istanbul emangalisayo kunye nezinto zempucuko yakudala. Ikwanayo necuisine ekhwankqisayo, iindawo zonqulo zamaSilamsi ezintle kunye neendawo ezithengisa ukutya ezincinci zasekhaya kunye namawa amahle eKapadokiya.
Nabani na odla ngokundwendwela iiholide ezidumileyo zehlabathi, ngaphandle kwamathandabuzo, akadluli kwilizwe elimangalisayo njengeSpain. Ukuphumla kulembombo yehlabathi kuthetha iiholide zokunethezeka! Eli lizwe ...
Ushwankathelo lwendiza ye-Boeing 737-800
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 01.11.2019
Enye yeenqwelo-moya ezisetyenziswa kakhulu kwiindlela ezimfutshane neziphakathi zokuhamba ngabathwali abaninzi abavela kwihlabathi liphela, kubandakanya iRussia, yiBoeing 737-800. Uphengululo lweengcali ...
Ulwandle oluLuhlaza eTshayina. Ulwandle oluLwandle kwimephu
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 17.12.2019
AmaTshayina abiza uLwandle oluMthubi ngeHuanghai. Yeyakhe isitya solwandlekazi olukhulu emhlabeni-iPacific. Olu lwandle, lunegama elingaqhelekanga, lubekwe kunxweme olusempuma kwilizwekazi lase-Eurasian, luhlanjwe ngasentshona ...
Apho ungaphumla ehlotyeni ngexabiso eliphantsi kunye nabantwana
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 19.11.2019
Apho unokuzonwabisa khona ehlotyeni ngokungabizi mali Umzali ngamnye kufuneka enze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba umntwana wakhe uza kutyelela ulwandle ehlotyeni. Awudingi ukuba ube nesipaji esityebileyo kwaye enkulu ...
Inani labemi baseSaratov. Ubuninzi beSaratov
I-Saratov sisixeko esikhulu kwiindonga zeVolgograd echibini, iziko lommandla wegama elifanayo. Elinye lawona maziko abaluleke kakhulu kwezenkcubeko, ezoqoqosho kunye nemfundo yommandla weVolga. Umxholo ophambili weli nqaku uya kuba ngabantu baseSaratov. Bangaphi abantu abahlala ...
Izikhululo zeYekaterinburg: iidilesi, izikhombisi-ndlela
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 18.12.2019
Yekaterinburg - ikomkhulu Urals. Esinye sezixeko ezikhulu zaseRussia. Ngumda ophakathi kweYurophu neAsia, kwaye unokukhuphisana ngokulula nezixeko ezikhulu. Ubomi buhlala bujikeleza ngokupheleleyo apha, ...
Iinqaba zamandulo zaseUkraine. Iinqaba kunye neenqaba zaseUkraine
I-castle sisakhiwo samaxesha aphakathi esakha sasebenza njengendawo yokuhlala enenkosi ethile. Ngokwesiqhelo sisakhiwo esikhulu esibandakanya izinto eziluncedo, izindlu kunye nezakhiwo ezikhuselayo. Iinqaba zaseUkraine ukusuka kwinkulungwane ye-11 ukuya kweye-19 eUkraine ...
Apho ungaya khona eKrasnoyarsk kubakhenkethi: uluhlu lwezinto ezinomdla zesixeko
IKrasnoyarsk sesinye sezona zixeko zikhulu eSiberia. Ime kumacala omabini oMlambo iYenisei, owahlula isixeko kwizithili ezininzi: ibhanki yasekhohlo kunye nebhanki yasekunene. Nganye ineyayo eyahlukileyo ...
IMekong ngumlambo waseVietnam. Indawo ekuyo, inkcazo kunye nefoto yoMlambo iMekong
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 19.12.2019
IMekong ngumlambo onomthombo wawo kwinxalenye esemazantsi eThaga laseTibetan, ngokukodwa kummango waseTangla. Kukuhamba kwamanzi okukhulu kwi-Indochina Peninsula esemazantsi mpuma e-Asiya, kunye neyesine ngobukhulu ...
Hotel "Montenegro", Montenegro, Budvanska Riviera, Becici: ncomo. Ihotele yaseMontenegro Beach 4 *
IMontenegro yindawo ekhethiweyo yeholide kubakhenkethi bethu. Ekukhangeleni amava amatsha, abahambi beza apha, bediniwe ziiholide zaseTurkey okanye eYiputa. Iindawo zokuchithela iMontenegro ziyathandwa ngenkonzo yazo ekumgangatho wokuqala, olona lwandle lucocekileyo ...
"Sandy Bay", Sevastopol: inkcazo kunye nokuphononongwa
Ukufumana phi indawo eCrimea yeholide yosapho okanye inkampani eyonwabisayo? Sinikela ingqalelo kwi-Pesochnaya Bukhta yenkcubeko kunye nolonwabo. ISevastopol, isixeko ekukuyo le hotele, iya kukuvulela iindwendwe ...
Ingingqi yeSumy: iilali, izithili, izixeko. I-Trostyanets, Akhtyrka, Ingingqi yeSumy
Imbali yawo nawuphi na ummandla ityebile kwiminyhadala eyahlukeneyo ethi ngamanye amaxesha itshintshe ubomi babemi bayo. Ummandla weSumy ugcina kwimemori yawo izinto ezininzi ezinomdla ezenzekileyo kummandla wawo ukusukela kwiXesha leBronze ...
Baths of Kaluga: iidilesi, iifoto, uphononongo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 16.11.2019
Amaxesha ngamaxesha, umzimba womntu uyasilela, kwaye ukuze uphinde uchache ngokupheleleyo, kufuneka uphumle kwaye uphumle. Kwaye eyona ndlela yokufezekisa olu hlobo lokuphumla kukutyelela indlu yokuhlambela okanye i-sauna. Inzuzo…
Indlu kaStalin ese-Abkhazia: iifoto kunye nokuphononongwa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 21.12.2019
Uqabane uStalin ngumntu oye wangena kwimbali yehlabathi njengomnye wemizekelo yenkohlakalo, ubuzwilakhe kunye nokubulawa kwabantu abaninzi. Nangona kunjalo, enkosi kuye, uluntu wakwazi ukuyeka uHitler kunye fascism. Nangona yena ...
Ihotele yamkelekile kwiJomtien Beach Indawo 3 * (Pattaya, Thailand): inkcazo, iifoto kunye nokuphononongwa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 24.12.2019
Abantu abaninzi bacinga ukuba ikhefu lolwandle linokwenzeka kuphela ehlotyeni. Kodwa nkqu nekhefu lasebusika ayisosizathu sokuyikhanyela ngokwakho ithuba lokufumana i-tan entle kwaye uqubha kulwandle olufudumeleyo noluthambileyo. Egqwesileyo ...
Hotel "eScandinavia" (Sestroretsk): idilesi, ncomo
Ukuba kudala ufuna ukuthatha ikhefu kukuxokozela kweso sixeko kunye nomsebenzi wobunzima, yiya ehotele "eScandinavia". I-Sestroretsk enomoya ococekileyo kunye nendalo entle yenye yeendlela ezilungileyo ...
Ihotele uLinda Seaview Ihotele 4 * (iHainan, China): inkcazo, iinkonzo, iifoto kunye nokuphononongwa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 05.10.2019
IHainan sisiqithi saseTshayina esikwiitropiki ezikumazantsi eli lizwe. Ibizwa ngokuba yi "Mpuma yeHawaii". Namhlanje, ngaphandle kokubaxa, yeyona ndawo idume kakhulu kubukumkani obuphakathi. Ngendlela, inyukile kule minyaka idlulileyo ...
IMetro "Vyborgskaya": imbali kunye neentsuku zethu
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 25.12.2019
Ngo-1975, isikhululo seMetro Vy Vygsgskaya savulwa kwisithili sembali saseSt. Ngaphandle kwento yokuba i-lobby yayo ayinaso isiphelo sobunewunewu, njengeeparagi zokuqala ...
Page 1 Page 2 ... Page 379 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,521.